I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle eguquguqukayo evela e-Eufy [Uphengululo] | Iindaba zeGajethi
I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle eguquguqukayo evela e-Eufy [Uphengululo]
UMiguel Hernandez | 21/07/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Ukhuseleko lwasekhaya luthatha ukubaluleka okukhethekileyo kula maxesha asehlotyeni, apho kungenxa yeholide okanye yolonwabo, sidla ngokuchitha ixesha elininzi kude nekhaya. Ke ngoko, ayikaze ibenzakalise ukusebenzisa onke amathuba okunikwa yitekhnoloji ukuze sizigcine sikhuselekile kwaye ngaphezu kwako konke ukuzola.
Yifumanise nathi kwaye ufumanise ukuba yintoni amandla ayo kwaye yintoni le khamera ingaphandle ye-Eufy ekwaziyo ukuyenza, ngaba uya kuyiphosa?
2 Ngaphandle kwamacingo kunye nokugcinwa kwendawo
3 Ukuphunyezwa kweenkqubo zokhuseleko
4 Unxibelelwano kunye nokuhambelana
Isixhobo silandela umgca wokuyila oqhelekileyo we-Eufy. Sinesixhobo esixande, esidibeneyo, kunye nemiphetho erhangqiweyo. Kwicala elingaphambili kulapho siya kuthi sifumane zombini izinzwa kunye nekhamera, ngelixa kwicala elingasemva kukho unxibelelwano olwahlukeneyo, njengenkxaso yodonga. Siyakhumbula ukuba yenzelwe kwaye ibekwe ngaphandle, ke olu donga lwentaba lunomdla ngakumbi. Ukufakwa kwayo kulula kakhulu kuba sinako ukuhambelana nayo ngetape enamacala amabini, okanye sinokuyijijisa ngqo eludongeni.
Ubungakanani: 9.6 x 5.7 x 5.7
Ubunzima: I-400 gram
Inkxaso yeselfowuni inendawo enomazibuthe omncinanana othe tyibilika kakuhle kwaye ivumela ukuba senze uhlengahlengiso kuluhlu olunomdla lokuhamba. Kwinqanaba loyilo kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba sithetha ngekhamera yangaphandle, ke sikhusela i-IP65 kwimozulu embi, ngendlela efanayo ethe ifemu ithembisa ukusebenza ngokuchanekileyo kuzo zombini iimeko ezishushu kakhulu nakwiimeko ezibandayo kakhulu, esingakhange sikwenze ikhathalogu. Kweli candelo asinakungcikiva ikhamera ngaphandle kokuba icompact, ikhangeleka intle naphi na. Ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo ngqo kwiAmazon.
Ngaphandle kwamacingo kunye nokugcinwa kwendawo
Ngokucacileyo sithetha ngekhamera engenazintambo ye-100%, inebhetri ethi ithiyori, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ibonelela ngeenyanga ezi-4 zokuzimela. Ngezizathu ezicacileyo asikhange sikwazi ukuqinisekisa ukuba iinyanga ezine zokuzimela zizalisekiswe ngokupheleleyo, pKodwa inkampani iyasilumkisa ukuba ukuzimela kuya kutshintshwa kuxhomekeke kubumbeko esilwenzileyo xa sisenza ushicilelo, kunye nemozulu. Sele siyazi ukuba zombini kushushu kwaye kuyabanda ziimeko zobushushu ezichaphazela kakubi iibhetri ze-lithium.
Le khamera igcina i-8GB yendawo, siyakhumbula ukuba irekhoda kuphela umxholo xa iisenzi esizenzileyo ziye "zatsiba", ke ngoko nge-8GB kufanelekile ukuba zanele iziqwengana ezincinci esizigcinayo. Ukuphucula ukhuseleko kunye nemfihlo, le khamera ine-AES256 protocol yokhuseleko kwinqanaba lokubhala, kwaye ukurekhodwa kuya kugcinwa kangangeenyanga ezi-2, ixesha apho ikhamera iya kuqala ukubhala ngaphezulu, nangona kunjalo, konke oku kunokuhlengahlengiswa kwisicelo se-Eufy. Oku kuthetha ukuba ikhamera ayinazicwangciso zobhaliso okanye iindleko zongezwa kuthengi.
Ukuphunyezwa kweenkqubo zokhuseleko
Nje ukuba usebenze ikhamera, uya kuba nakho ukuseka imimandla emibini yokhuseleko, ukuze kungabikho konke ukuhamba kwe-angle yokujonga okunika izilumkiso. Ngendlela efanayo, inkqubo ine-Artificial Intelligence, ngale ndlela iyakwazisa umsebenzisi kuphela xa "umhlaseli" egoduka, ade achaze nokuba uyafihla okanye uhamba ngezilwanyana. Izilumkiso zikhawuleza njengoko sikwazi ukubona, malunga nemizuzwana emithathu kuthatha ixesha elide ukuba ikhamera ibone intshukumo ehlaselayo kwaye ibonise isilumkiso kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Inkqubo epheleleyo ye-HD 1080p yokurekhoda
Ukuba le nkqubo iyasebenza, ikhamera iya kukhupha isandi esikwi "alarm" ukuya kuthi ga kwi-90 dB, enganikeli ukusebenza okuphezulu ngokwaneleyo kwinqanaba lengxolo, kodwa iya kuba iyamcaphukisa. Oku kunokuba yokhuseleko kunye. Ngendlela efanayo, ikhamera inenkqubo yokubona ebusuku ngokusebenzisa ii-infrared LEDs ezivumela ukuchongwa ngokuchanekileyo kwezifundo kumgama ongama-8 eemitha. Ubukrelekrele bobugcisa bekhamera ye-Eufy ithembisa amaxesha ama-5 ngokukhawuleza ukuchonga izifundo ezihlaselayo kwaye inikezela nge-99% yokuncitshiswa kwealam zokuxoka.
Unxibelelwano kunye nokuhambelana
Okokuqala, le khamera inokubambisana ngokupheleleyo kunye nababini abancedisi abaphambili kwimarike, Sithetha ngokucacileyo ngeAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, ubumbeko lulula ngesicelo kwaye unxibelelwano luyakhawuleza Nje ukuba sidibanise ikhamera kwinethiwekhi efanayo ye-WiFi esiyilungisileyo, kwimeko yethu siqinisekisile ukuba nge-Alexa indibaniselwano ilula kwaye igqibelele. Ulawulo lwesicelo sika-Eufy, esifumaneka kwi-iOS kunye ne-Android sisonke, Isivumela ukuba sihlengahlengise i-engile, silawule izilumkiso, jonga umxholo wokusasaza kwaye wazi imeko yangoku yebhetri phakathi kweminye imisebenzi emininzi. Akukho nto siyisweleyo.
Omnye umsebenzi wesicelo kukusebenzisa ithuba lokuba isithethi sidityaniswe kwikhamera, oko kukuthi, siya kuba nakho ukubona ngexesha elifanelekileyo ukuba kwenzeka ntoni kwaye sithethe kumacala amabiniOko kukuthi, ukukhupha imiyalezo kunye nokuthimba ngemakrofoni yakho. Ngale ndlela, ukuba umzekelo abantwana basegadini, sinokubalumkisa ukuba lixesha lokuba bagoduke ngqo bevela kwikhamera kwaye ngaphandle kwengxaki, kwaye bacacise neemeko zokuhanjiswa kweAmazon.
Utshintsho lokugqibela: 17 de julio de 2021
Ikhamera ye-Eufy igqibelele, ngokuchasene nokungqina xa ungaphandle ngaphandle kweendleko ezongeziweyo. Yintoni i-Eufy ebonelela ngayo, ngaphaya kwexabiso layo lemali, kukuzinza kweemveliso zayo kunye nenkonzo eyaziwayo yabathengi.Ukhuseleko lweSoloCam ...nangona ngokubanzi ihlala inesaphulelo se-10% ngezihlandlo ezinqabileyo, ke sicebisa ukuba uhlale unomdla kwisiphumo kwiwebhu yesiqhelo. Ungajonga isixhobo kwiwebhusayithi esemthethweni.
Izinto eziyimpumelelo kunye noyilo
Inkqubo yokuseta ngamanye amaxesha iyasilela
Uluhlu lwe-WiFi alubanzi kangako
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-SoloCam E20, ikhamera yangaphandle eguquguqukayo evela e-Eufy [Uphengululo]
I-Asus TUF Dash F15, amandla kunye noyilo zinokuhambisana
Iikhamera zokujonga ividiyo ngokukhusela i-360